नेपालमा फेरि राजसं’स्था फ’र्किएला त ? स’म्भावना कति ? – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ३०, २०७८ समय: १६:२६:२५
समाचार विश्लेषण / यस वर्षको दशैंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्थाको सान्दर्भिकतबारे उल्लेख गरेका छन् । नेपालका अ’न्तिम रा’जा शाहले राजसंस्था फर्काउने कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । तर, उनको यसपटककको दशैंको शुभकामनामा राजसंस्थाविनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रविनाको राजसंस्था नेपालमा सान्दर्भिक नहु’ने टिप्प’णी गर्नु अ’र्थपूर्ण छ ।
पूर्वराजा शाहले मौलिक धर्म संस्कृति सं’कटमा पार्ने र राष्ट्रहितमा केन्द्रित पार्नुपर्ने परराष्ट्रनीति अस’न्तुलित भई राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चु’नौती थपिएको टि’प्पणी गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिमा सनातन हिन्दु धर्मको विषय र छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्ब’न्धको विषय इंकित छ ।
यसबाट उनले राजसंस्था रहँदा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित हुने सन्देश दिन खोजेका छन् । हिन्दु राष्ट्रको विषयमा ब’हस भइरहँदा उनको त्यसमा पनि चा’हना देखिएको छ ।
देशमा गणतन्त्र, धर्म’नीर’पेक्षता र संघीयताको अभ्यास भइरहँदा यसप्रति विस्तारै वितृ’ष्णा जाग्ने गति’विधिहरु भइरहेका छन् । राजसंस्था नहुँ’दा राजनीतिक दलहरुले म’नो’मा’नी गर्न थालेको, संविधा’नमाथि प्र’हार गर्ने गतिवि’धिहरु भइरहेको ब’हस चलिरहेको छ ।
दलहरुबीच निकै ठूलो राजनीतिक टक’राव छ । यसले राजनीतिक अस्थि’रतालाई ब’ढा’वा दिने ख’त’रा छ । यसकारण पनि जनतामा नैरा’श्यता उत्पन्न भई पुरानै व्यवस्थाप्रति मोह जाग्ने वातावरण विकास हुँदैछ ।
धर्म’नीरपेक्ष’ताको अभ्यासका क्रममा सनातन हिन्दु धर्ममाथि आ’क्रमण भइरहेको भन्दै उक्त ध’र्मसम्वद्ध सं’स्थाहरु ए’कजुट हुन थालेका छन् । हिन्दु धर्मा’लम्बी बहुसंख्यक जनता यसप्रति सचे’त हुन थालेका छन् । आफ्नो धर्म’संस्कृतिप्रति आस्था बढ्दै गएको छ ।
दशैं जस्तो चाडमा पनि ते’रो र मे’रो भन्ने सोच बनाएर द्व’न्द्व नि’म्त्याउन खो’जिएको छ । अरुको संस्कृति र चाडपर्वप्रति नका’रात्मक धारणा बढाउने योजनावद्ध का’र्यशैलीका कारण हिन्दुहरु एकजुट हुन थालेका छन् । हिन्दुराष्ट्रको मु’द्दा बलि’यो बन्दै गएको छ । यसले कतै राजसंस्था फ’र्काउने योजनालाई साथ त दिदैन भन्ने चा’सो बढेको छ ।
एका’त्मक राज्यप्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा जनता क’रको मा’रमा परेका छन् । प्रदेशहरुमा राजनीतिक खि’चातानी बढेको छ । सरकार बनाउने ढा’ल्ने खे’लहरु अ’स्वस्थ रूपमा बढेको छ । यसले संघीयताप्रति पनि नैरा’श्यता बढ्न थालेको छ । यसले पनि पुरानै व्यवस्था फर्काउनेहरुलाई ब’ल पुगिरहेको छ ।
यी घट’नाक्रम हेर्दा रा’जसंस्था फर्का’उनेहरुका लागि फेरि श’क्ति स’ञ्चयको वातावरण विकास हुँदैछ । पूर्व राजा या राजसंस्था फर्काउने प’क्षधरले भन्दा गणतन्त्र पक्ष’धरकै गति’विधिले मा’होल तयार गर्दैछ । तर, राजसंस्था फ’र्काउन सजिलो भने अवश्य छै’न ।
यसका लागि कुनै ठू’लो क्रा’न्ति भई जनताको म’तबाट अनु’मोदित हुनुपर्छ कि त संविधान अनुसार दुई ति’हाईको मतबाट स’म्भव हु’नसक्छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु गणतन्त्रको प’क्षमा रहेकाले रा’जसंस्थाको स’म्भावना लगभग छै’न । तर, राजनीति सम्भा’वनाको खे’ल हो । कुनैपनि बेला स’त्ता प’ल्टन र व्य’वस्था उ’ल्टन सक्छ ।
विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको स’त्ता हातमा लिने र निरं’कुश तरिकाले संविधान उ’ल्लंघन गरी क’ठोर क’दम चा’ल्ने कार्यशैलीले गण’तन्त्रको ढो’का खो’लेको थियो । गणतन्त्र आउनुमा मुख्य योगदानकर्ता नै ज्ञानेन्द्र शाह नै थिए । ठिक त्यसै गरी अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरु पनि स’त्तामा पुग्यो कि निरं’कुश बन्दै जाने र संवि’धानमाथि प्र’हार गर्ने गति’विधि गर्न थालेका छन् । त्यसले ह’द ना’घेमा अर्को वि’द्रोह भई व्यव’स्था परि’वर्तन हु’नसक्छ ।
जसरी गणतन्त्र ल्याउनुको कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीहरु भए ठिक त्यसैगरी गणतन्त्र स’मा’प्त भई राजसंस्था स्थापनाको कारण अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलका नेता र गणतन्त्रवादीहरु नै हुन’सक्छन् । रिपो’र्टर्स नेपा’लबाट सा’भा’र ।